Electric Minibus နှင့် Coach များအတွက်လျှပ်စစ်လေအေးပေးစက်
Electric Bus နှင့် Coach များအတွက်လျှပ်စစ်လေအေးပေးစက်, Double Air Return
Mini နှင့် Midi City Bus သို့မဟုတ် Tourist Bus များအတွက်လေအေးပေးစက်
ဘတ်စ်ကား၊ နည်းပြ၊ ကျောင်းဘတ်စ်ကားနှင့်ပီသသောဘတ်စ်ကားများအတွက်လေအေးပေးစက်
စီးပွားရေး၊ ဘတ်စ်ကား၊ နည်းပြ၊ ကျောင်းကားနှင့်ပီသသောဘတ်စ်ကားများအတွက်စီးပွားရေးလေအေးပေးစက်
ခေါင်မိုးတိုက်ရိုက် Drive ကို Truck ကားရေခဲသေတ္တာယူနစ်တပ်ဆင်ထားသည်
ရှေ့တပ်ဆင်ထားတိုက်ရိုက် Drive ကို Truck ကားရေခဲသေတ္တာယူနစ်
ကိုယ်ပိုင်စွမ်းအင်သုံး Truck ရေခဲသေတ္တာယူနစ်
မီးရထား Transit လေအေးပေးစက်
ရထား Transit လေအေးပေးစက်စီးရီး
Mini နှင့် Midi City Bus သို့မဟုတ် Touris များအတွက်လေအေးပေးစက် ...
SE စီးရီးသည်မီနီဗန်၊ ဗန်သို့မဟုတ်ထရပ်ကားတိုအတွက်အပြည့်အဝလျှပ်စစ်ထရပ်ကားအအေးယူနစ်ဖြစ်သည်။
Truck Refrigeration SE စီးရီး၏နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များ:
မော်ဒယ် SE200-T က SE250 SE400 SE500
သင့်လျော်သောပါဝါ DC300V≤Vehicle≤DC700Vလျှပ်စစ် standby AC220V DC300V≤Vehicle≤DC700Vလျှပ်စစ် standby AC220V DC300V≤Vehicle≤DC700Vလျှပ်စစ်အဆင်သင့် AC380V / AC220V DC300V≤Vehicle≤DC700Vလျှပ်စစ် standby AC380V / AC220V
သက်ဆိုင်သောအပူချိန် （℃） -25 ～ 20 -25 ～ 20 -25 ～ 20 -25 ～ 20
သက်ဆိုင်သောပမာဏ （m3） ၅ ～ ၈ ၆ ～ ၁၀ 12 ～ 18 ၁၄ ～ ၂၂
သက်ဆိုင်သောအသံအတိုးအကျယ် -18 （（m3）68 16 18
၁.၇ ℃ 2100 2350 3900 5100
အပြည့်အဝပါ ၀ င်သောရဟတ်အမျိုးအစား (DC ကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်း)
ဗို့အား AC220V /3～ / 50Hz AC220V /3～ / 50Hz AC220V /3～ / 50Hz AC220V /3～ / 50Hz
ရေငွေ့ လေစီးဆင်းမှုပမာဏ （m3 / h） 900 1800 1800 1800
ရေခဲသေတ္တာ R404A R404A R404A R404A
အားသွင်းသည့်ပမာဏ （kg） ၁.၁ ၁.၂ ၁.၅ ၁.၅
ပါဝါ (W) 1600 1700 2800 3500
ရေငွေ့ပျံအရွယ်အစား （mm） 610 * 515 * 160 1291 * 1172 * 265 1400 * 1152 * 482 1530 * 735 * 675
ကနျြးမာရေးအရွယ်အစား （mm） 1250 * 920 * 220
SE200 - T ကနည်းပညာဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက် SE250 နည်းပညာဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက် SE400 နည်းပညာဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်
1. အအေးစွမ်းရည်ကိုတရုတ်အမျိုးသားစံ GB / T21145-2007 ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် 37.8 ဖြင့်မှတ်သားထားသည်℃။
၂။ ထရပ်ကားကိုယ်ထည်ပမာဏကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ရည်ညွှန်းအတွက်သာဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ်အသုံးပြုသောပမာဏသည်ထရပ်ကား၏ကိုယ်ထည်အပူကိုကာကွယ်သောဂုဏ်သတ္တိများ၊ အပူချိန်နှင့်ကုန်တင်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
၁။ All-in-one ယူနစ် - ကုန်ပစ္စည်းများပိုမိုတင်ဆောင်ရန်သင့်လျော်သောအသားနောက်တွဲယာဉ်များကိုပိုမို အသုံးပြု၍ ပိုမိုအသုံးပြုလာကြရာပိုမိုကျစ်လစ်သောဒီဇိုင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအဆင်ပြေမှုများလိုအပ်သည်။
၂။ ပိုးသတ်ခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုသန့်ရှင်းရေးနည်းပညာ - ကုန်တင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည်ဘက်တီးရီးယားများစွာကိုထုတ်လုပ်သည်။ UV နှင့် ozone ပိုးကင်းသည့်ယူနစ်သည်ကျန်ရှိသောအန္တရာယ်ရှိသောအရာများကိုရှောင်ရှားရန်နှင့်အစားအစာလုံခြုံမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်ရထားတစ်ခုလုံးကိုပိုးသတ်ပြီးပိုးသတ်ဆေးပြုလုပ်နိုင်သည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင်၊ ရေငွေ့ပျံစက်ကိုမိမိကိုယ်ကိုစုစည်းရန်အထူးသန့်ရှင်းရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုအသုံးပြုသည်။ ရေခဲသည်အရည်ပျော်။ ရေငွေ့ပျံစေသည့်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိဖုန်များကိုဆေးကြောခြင်း၊
၃။ အဝေးမှစောင့်ကြည့်သောနည်းပညာ။ ဖောက်သည်များ၊ အအေးထရပ်ကားထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်အအေးယူစက်များသည်အင်တာနက်မှတစ်ဆင့်အော်ဂဲန်းတစ်ခုလုံးကိုဖွဲ့စည်းသည်၊ အရည်အသွေးနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုအဆင့်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ဖောက်သည်များအတွက်ပိုမိုတန်ဖိုးရှိစေသည်။
(၄) DC ကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်းနည်းပညာ: sine wave အပြည့်အဝ DC ကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်းနည်းပညာကိုထိန်းချုပ်ရန်အသုံးပြုသည်။ compressor ၏စွမ်းဆောင်ရည်သည်ယေဘုယျ AC fixed frequency compressor များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၃၀% ကျော်ပိုများသည်၊ မော်တော်ယာဉ်၏မိုင်အကွာအဝေးကိုသေချာစေသည်။
R404A DC အင်ဗာတာတွန်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
Songz ၏စွမ်းအားကို အခြေခံ၍ DC အင်ဗာတာတွန်းကိုတီထွင်ခဲ့ပြီးအထူးရေခဲသေတ္တာအတွက် R404A အလုပ်လုပ်သည့်အလတ်စားတွင်အသုံးချခဲ့သည်။ ၎င်းသည်လျင်မြန်စွာအေးခဲစေသောလိုအပ်ချက်များကိုသိရှိနားလည်ပြီးမြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်၊ စွမ်းအင်ချွေတာမှုနှင့်တိကျသောအပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုတို့၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုအောင်မြင်စေနိုင်သည်။
လက်ရှိတွင်စက်မှုလုပ်ငန်းရှိလျှပ်စစ်အအေးခန်းများတွင် AC fixed-frequency compressors ကိုအသုံးပြုသည်။ ဤအစီအစဉ်တွင်မြင့်မားသောစွမ်းအင်သုံးစွဲမှု၊ အခန်းအပူချိန်အတက်အကျကြီးခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်း၏လိုအပ်ချက်များနှင့်မကိုက်ညီပါ။
(၆) Brushless ပန်ကာ: brush brush ၏သက်တမ်းသည်နာရီပေါင်းများစွာမှနာရီ ၄၀,၀၀၀ အထိတိုးမြှင့်ခြင်း၊ ပန်ကာ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို ၂၀% ကျော်မြင့်တက်စေပြီးစွမ်းအင်ချွေတာခြင်းနှင့်စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုသိသိသာသာတိုးတက်စေသည်။ system optimization အောင်မြင်ရန်ဖိအားအာရုံခံကိရိယာနှင့်အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာဖြင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ညှိနှိုင်းမှုထိန်းချုပ်ခြင်းကိုအသုံးပြုခြင်း
three-in-one controller ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ရှိပြီးသား AC / DC-DC converters, frequency converters နှင့် controller discrete components များကိုပေါင်းစည်းပြီး internal functional modules များကို share လုပ်ပါ။ မြင့်မားသောလုံခြုံမှု၊ မြင့်မားသော protection level (IP67)၊ အရွယ်အစားသေးငယ်။ Pre-charging function နှင့်အတူသုံး -In-one controller ကိုဒီဇိုင်းဆွဲပါ။ ။ EMC သည် GB / T 18655 CLASS3၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပြီး၊ CAN ဘတ်စ်ကားတစ်ခုလုံးနှင့်ဆက်သွယ်မှုကိုအဝေးမှစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
အဆင့်သုံးဆင့်ခွဲခြင်း: အခြေခံ၊ အရန်နှင့်အားဖြည့် insulator တွင်လည်း
ဆော့ (ဖ်) ဝဲကာကွယ်ခြင်း - Over-current၊ over-voltage၊ under-voltage နှင့် phase-loss အလိုအလျောက်ကာကွယ်မှု
နှစ်ဆမြင့်မားသောဗို့အားကာကွယ်မှု - မြင့်ဗို့အားခလုတ်နှင့်ဖိအားမြင့်ကယ်ဆယ်ရေးကိရိယာ
မီးဘေးကာကွယ်ရေးဒီဇိုင်း - အဆင့်မြင့်သောမီးခံပစ္စည်းများ၊ အပြုသဘောဆောင်သောနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောလျှပ်ကူးပစ္စည်းများအတွက်ပြောင်းပြန်ဆန့်ကျင်ဒီဇိုင်း
ထရပ်ကားရေခဲသေတ္တာယူနစ် SE စီးရီး၏လျှောက်လွှာများ။
ရှေ့သို့ ရှေ့တပ်ဆင်ထားတိုက်ရိုက် Drive ကို Truck ကားရေခဲသေတ္တာယူနစ်
နောက်တစ်ခု: ကိုယ်ပိုင်စွမ်းအင်သုံး Truck ရေခဲသေတ္တာယူနစ်
တိုက်ရိုက် drive ကိုထရပ်ကားရေခဲသေတ္တာ
တိုက်ရိုက် drive ကိုထရပ်ကားရေခဲသေတ္တာယူနစ်
Mini နှင့် Midi City Bus သို့မဟုတ် T အတွက်လေအေးပေးစက် ...
လျှပ်စစ်ကားနှင့် C အတွက်လျှပ်စစ်လေအေးပေးစက် ...
အမှတ် 4999 Huaning လမ်း၊ ရှန်ဟိုင်း၊ PR တရုတ်၊ ၂၀၁၁108